Ahmet Emin Yılmaz : Talo kale oo la yaab leh oo ku saabsan tareenka xawaaraha sare ku leh ee Bursa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaAhmet Emin Yılmaz : Talo kale oo la yaab leh oo ku saabsan tareenka xawaaraha sare ku leh ee Bursa
05 / 06 / 2012 16 Bursa, Ahmet Emin Yılmaz, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY, qorayaasha
Mashruuca tareenka xawaaraha-dheer, waxaa ka soo muuqday in Metropolitan-ka ay u soo jeedisay xarun dhexdhexaadin ah Yarkın Demirtaş wareejinta rakaabka. Tan kale, qorshaha Master Master ee Gaadiidka ayaa diyaarisay. Dr. Haluk Gerçek wuxuu soojeedsaday bartilmaameedka bartamaha magaalada 2030 oo leh lugeeyayaal iyo baaskiil ...
Waxaan gaarsiinay horumarka kujira sadarradan shalay Demir Guud Agaasinka Dekadaha Tareenka iyo Dhismaha Garoomada Diyaaradaha, magaca gaagaaban ee DLH ee tareenka xawaaraha sare, waxaa lagu wareejiyay mashruuca guud ee ay diyaarisay TCDD. Wuxuu hadda ka shaqeeyaa mashruuca hirgelinta TCDD. Mudnaanta waxaa la siiyay sharci-ku-wareejinta wadada.
Inta la diyaarinayo mashruuca hirgelinta TCDD, waxay diiradda saareysaa wadooyinka u dhaw wadada weyn waxayna u baahan tahay buuxin yar si loo yareeyo kharashaadka.
Mashruucu wali lama dhammaystirin, isbeddello yar-yarna way socdaan.
DLH'nın waxay ku dhawaaqday mashruuca Balat'ta Bursa Station inay tahay meesha ugu dhow xarunta ugu dambeysa ee soo jeedinta Deçeravcuş'u, iyadoo laga helayo xarunta Kazikli ee Magaalo Weyn ee aan loo baahnayn, iyadoo la tixraacayo horumarada TCDD'ye ay cusbooneysiisay soo jeedinta.
Soo-jeedinta khubarada TCDD, shaqaalaha farsamada ee magaalooyinka iyo la-taliyayaasha Qorshaha Gaadiidka, waxaa jiray isbeddelo is-waafaq ah oo ku saabsan soo-jeedintan cusub.
Tusaale ahaan ...
Sida aan soo warinay shalay, waxaa la soo jeedinayaa in la yiraahdo Yenişehir Station waa in laga dhiso meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Yenişehir ee ma ahan Sise Cam. Saldhigga Bursa, waqtigan wuxuu diiradda saarayaa isgoyska Wadada-Izmir Road. Waxaa sidoo kale jira diidmo ku saabsan soo jeedintan ka socota Piled Station.
Warbixinta cusub waxay dejisey soo jeedin la yaab leh markii la codsanayo Pile.
Meesha loogu talo galay xarunta Kazıklı waxay ku taal badhtamaha beeraha iyo geedo dhexdooda. Ma fududa in rakaabku yimaadaan halkan ”.
Demir Demirtas, oo ah midka ugu dhow gobolka, wuxuu leeyahay labadaba karti xoogleh sababtoo ah aagga warshadaha iyo suurtagalnimada rakaabka sababta oo ah xiriiriyaha magaalada. "
Ahmiyadani sidoo kale waa muhiim:
“Demirtas Station waxay sidoo kale aad ugu dhowdahay Terminal marka laga hadlayo qorshaha gaadiidka.”
Hindisaha ayaa ...
Waxaa sidoo kale la tilmaamay in haddii saldhigga weyn, oo ah Bursa Station, loo wareejiyo meel u dhow Hal Wadada u dhow Ring Wadada ama isgoyska İzmir Highway-Highway oo ah meel ka durugsan Deçeravuş iyo Balat, Demirtaş Station wuxuu noqon doonaa mid aad muhiim ugu ah bartamaha magaalada iyo isku xirka Terminal.
Aan aragno ...
Sidee ama illaa heerkee ayaa dib-loogu-eegi doonaa soo-jeedintan iyada oo loo eegayo xaaladaha isbeddelaya iyo is-waafajinta farsamada?
Saxiixa Tareenka Sare ee Degdega ah
In kasta oo doomaha ay sii wadayaan in ay u beddelaan mashruuca mashruuc fulineed iyo qiimeynno ku saabsan aagagga saldhigga, TCDD waxay ku dhejisay calaamaddeedii ugu horreysay ee Wadada Tareenka ee xawaaraha sare.
Sawirka tareenka xawaaraha dheer waxaa sidoo kale lagu soo daray calaamada maadaama qiimaha heshiiska loo qorey 393.170.105,40 TL.
Ahmet Emin Yılmaz : Raadinta xarun cusub ee tareenka xawaaraha sare ku leh ee Bursa
Ahmet Emin Yılmaz : Tareenka ku yaal magaalada Bursa ayaa la dajiyay, isbeddel ayaa bilaabmay
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay la kulantay TCDD tareenka xawaaraha sare - Ahmet Emin Yılmaz
Ahmet Emin Yılmaz : Tareenka xawaaraha sare leh ee TCDD ayaa la geeyay Bursa Station Geçit laakiin…
Ahmet Emin Yılmaz : Tareenka Degdega ah ee Lagu Furay Dhibaatooyinka Saldhigga
Ahmet Emin Yılmaz Barnaamijka TCDD waa mid diyaar ah: Tareen kasta kuma joogsan doono Yenişehir
Ahmet Emin Yılmaz: Xarunta tareenku waxay cabsi gelisaa dhulka, maahan wadada loo maro
Ahmet Emin Yılmaz : Bartamaha isgoyska gaadiidka ayaa kusii dhowaaneysa magaalada Istanbul
Ahmet Emin Yılmaz : Farxadda Tareenka Gemlik
Ahmet Emin YILMAZ: Baydhabo waxay samaysay Mudanya iyo tareen Balat oo ah xarun cusub oo soo jiidasho leh
Mehmet Emin Horoz Xirfad Farsamo iyo Farsamo Anatolian High School Macaristan
Gawaarida Gaadiidka Gawaarida ee loo yaqaan "RIGHWAY TRANSPORTATION"